Cloud Song အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（1.5GB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Cloud Song - บทกวีแห่งท้องฟ้า
ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိန်ခေါ်မှုအများဆုံးခရီးသွားခြင်းကို Cloud Song ရှိအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြင်းထန်ဆုံးခရီးသွားခြင်းကိုတရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ယနေ့ Melody ၏အစ။ ထိုအခါကောင်းကင်၏ကဗျာ၌ရွတ်ဆို!
Cloud Song, COSTER style song, cloud style style style mmorpg စွန့်စားမှုဂိမ်းများကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူလှည့်လည်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူပျော်စရာ။ အစွမ်းသတ္တိတိုးမြှင့်ဖို့ အထူးခရီးစဉ်အတွက်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်မိတ်ဖွဲ့ခြင်းနှင့်မိတ်ဖွဲ့ခြင်းအသစ်ကိုဖန်တီးပါ။
- မီးမောင်းထိုးပြခြင်း -
မူကြမ်းကိုရေးဆွဲခြင်း, Pative Most မူကြမ်းကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်ပေါင်းစည်းမှုတစ်စုံသည်သင်နှင့်အတူအဆင့် (3) ခုအထိဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အတူအဆင့်3ဆင့်အထိဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။ ☆ထိပ်တန်းအလုပ်အကိုင်5ခုသည်မြင့်မားသောအတန်းသို့ကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်လာသည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးစတိုင်နှင့်အညီကစားရန်ခွင့်ပြုသည် မဟုတ်ပါ, အကန့်အသတ်မရှိသောလိင်, မယား, လေးသမား, oracle, rodacle, rodacle, rodacle နှင့် rogage တို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်ပင်နေရာထိုင်ခင်းမဆိုအလုပ်2ခုကိုအတူတကွပြောင်းလဲရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ အကန့်အသတ်မဲ့ရောနှောခြင်းနှင့်ကိုက်ညီဖက်ရှင်ဆင်ခြေဖုံး
သင်၏အထောက်အထားကိုဖက်ရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးဖြင့်သင်၏အထောက်အထားကိုဖော်ပြသည်။ အမျိုးမျိုးသောဖက်ရှင်ပစ္စည်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါ။ သင်၏စိတ်ကူးယဉ်ပုံစံအရ0တ်ဆင်ပါ။
အားကောင်းတဲ့အသင်းကိုစုစည်းပါ ဒဏ္ leg ာရီသူဌေးကြီးကိုအောင်နိုင်
တစ်ဝက်ကျော်အောင်ပွဲခံရန်အသင်းတစ်သင်း !! သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတိုက်ခိုက်ပါ အန္တိမ item အနိုင်ရသူဌေးကလိုက်ရှာ။
များစွာသော mini ဂိမ်းများ ကစားရန်ရွေးချယ်ပါ, ခပ်သိမ်းသောအချိန်များတွင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲပါစေ။
☆ စုရုံး စစ်ပွဲတွင်စစ်ပွဲတွင် 40 VS 40 သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲတွင်ပျော်စရာကောင်းသည်။ Gildwar လှုပ်ရှားမှုများတွင်အနိုင်ရရန်အဖွဲ့အပါအ0င် အထူးဆုများကိုရယူပါ။
သူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံပါ အထီးကျန်ကိုနှိပ်ပါ။ ရုပ်တုတစ်ပါးဖြစ်ခြင်း၏လမ်းစဉ်ကိုမခက်ခဲတော့ပါ။ ဘလော့ဂ်စနစ်သည်သင့်အားဂိမ်းတွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်သတင်းများကိုမွမ်းမံရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အတိုချုပ်ဆက်ဆံရေး။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့သွားလိုသောငှါ ~
ကင်မရာ - Photography supporting
support_audio: အသံ Chat features များကိုထောက်ပံ့သည်
Cloud Song (บทกวีแห่งท้องฟ้า) เกมมือถือ MMO ผจญภัยไปกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจในโลกแฟนตาซี มีภาษาไทย
Cloud Song(Guardians of Cloudia) เลือกอาชีพไหนดี อาชีพไหนเล่นง่าย ข้อดีข้อเสีย จุดเด่น PVP&PVE
เกมมือถือใหม่ Cloud Song บทกวีแห่งท้องฟ้า แฟนตาซีภาพสวยเล่นง่าย (SEA)
Cloud Song #1 ก้าวแรกสู่โลก MMORPG (เกมมือถือเปิดใหม่)
รีวิว มังกรฟ้า Cyclone SSR + วิธีการเรียกคืนค่าสถานะ สัตว์เลี้ยง | Cloud Song: บทกวีแห่งท้องฟ้า
Cloud Song - บทกวีแห่งท้องฟ้า 1.0.7